လိပ်ပြာ Staxx | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! လိပ်ပြာ Staxx | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
အဆိုပါ NetEnt powered slot က, လိပ်ပြာ Staxx အမြင်အာရုံလှပသောပုံပေါ်တဲ့တော်တော်ရိုးရှင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအပူပိုင်းပန်းပွင့် blooming ကြသည်ရှိရာချစ်စရာကောင်းတဲ့အရပျ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်များနှင့်တောက်ပသောလိပ်ပြာမှာကစားရန်မရရှိနိုင်ကြောင်းကိုဒီ slot က၌သူတို့ကိုအကြောင်းကို fluttering နေကြတယ် အိတ်ကပ် Fruity အားကစားပြိုင်ပွဲ.
လိပ်ပြာ Staxx ၏ရေးသားသူအကြောင်း
Net က Entertainment ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည် 1996 နှင့်ကျော်၏အရေးပါသောအတှေ့အကွုံမြားရရှိထားသူ 20 အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်း. အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးအရညျအသှေးလောင်းကစားရုံဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပြောရလျှင်နှင့်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ရာပူဇော်သက္ကာထဲကတစ်ခုမှာပျော်မွေ့နိုင်ပါ အိတ်ကပ် Fruity အားကစားပြိုင်ပွဲ.
မှာကစားရန်မရရှိနိုင်ကြောင်းလေးတန်းနှင့်ဤ slot ကအတွက်လေးဆယ် paylines နှင့်အတူငါး reels ရှိပါတယ် အိတ်ကပ် Fruity အားကစားပြိုင်ပွဲ. သငျသညျ 40p အဖြစ်အပေါင်းတို့နှင့်သဟဇာတ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီလှည့်ဖျားဘို့ရန်£ 400 အထိအဖြစ်နည်းနည်းကနေဂိမ်း၏ reels လည်ရ. အဆိုပါ reels ပေါ်သင်္ကေတဖဲချပ်ဝေကဒ် J ကိုမှအဖြစ်သုံးအပူပိုင်း Bloom မှ icon များနှင့် reels အပေါ် stacked ပုံတစ်ခုတောက်ပလိပ်ပြာတို့ပါဝင်သည်. အဆိုပါတောရိုင်းအိုင်ကွန်မြင်ကွင်းကိုအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်လွှင့်ရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်အခြားသင်္ကေတများအစားထိုးခြင်းငှါ.
၏ဆုကြေးငွေ features တွေ အိတ်ကပ် Fruity အားကစားပြိုင်ပွဲ အထိုင်များပါဝင်သည်:
ပယ်ချ- ဒီ feature ဖြစ်ပေါ်အောင်, သငျသညျလုံးဝ reel ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ stacked လိပ်ပြာဆင်းသက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သူတို့ကအတူတူပင်တန်းမလိပ်ပြာနှင့်အတူဘယ်ဘက်မှအများဆုံးအခြမ်းကိုပြောင်းရွှေ့. အဆိုပါ feature ကိုကြာသည်အထိသူတို့အနေအထားတွင်ရှိနေဆဲ. သင်က reels အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီအပိုလိပ်ပြာဆင်းသက်များအတွက်အပို respin ခံယူခြင်းနှင့်သီးပြွတ်၌ရောနှောဖို့, လက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှပျံ.
Buttery လှည့်ဖျား- မြင်ကွင်းကိုအတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလေယာဉ်ဆင်းသက်သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြဲဖြန့် icon တွေကိုဒီဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်. သငျသညျသုံးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေရတဲ့ငါးလိပ်ပြာလှည့်ခြင်းများကိုလက်ခံရရှိ, ခြောက်လလိပ်ပြာလေးကိုအရပ်ရပ်ကွဲပြားစေဘို့ spins နှင့်နောက်ဆုံးခုနစ်ခုလိပ်ပြာငါးခုကိုအရပ်ရပ်ကွဲပြားစေဘို့ spins. ဒီ feature စဉ်အတွင်း, သငျသညျပိုးအိမ် icon များ reels အပေါ်ပေါ်ထွန်းကြလိမ့်မယ်. သူတို့ကမြုံသို့မဟုတ်တက်ကြွစေနိုင်သည်. တက်ကြွစွာပိုးပု reels အပေါ်လေယာဉ်ဆင်းသက်ပြီးနောက်လိပ်ပြာသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဖွင့် respin အင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့တူညီသောအတန်းပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက်ဆီသို့ဦးတည်ပျံသန်း. အဆိုပါ feature ကိုကြာရှည်ခံမှီတိုင်အောင်သူတို့ကအစအနေအထားတွင်ရှိနေပါဦးမည်.
လိပ်ပြာ Staxx တစ်ဦးအမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်ဂိမ်း slot ကမီးလိပ်ပြာများနှင့်အပူပိုင်း Bloom နှင့်ပြည့်စုံကမ္ဘာရန်သင့်အားယူပြီးဖြစ်ပါသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုလိပ်ပြာလည်သင့်ရှယ်ယာ 120x ရရှိသွားတဲ့နှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ခုနစ်ခုသင်ဤအတွက် 840x သင်၏စုစုပေါင်းအစုရှယ်ယာလက်ခံရရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်တဲ့ အိတ်ကပ် Fruity အားကစားပြိုင်ပွဲ အထိုင်.